TOP 10 Oprah Winfrey xigashooyinka 2020 - xigasho Pedia
11 xigasho iyo odhaah
Noloshu waa hadiyad oo waa inaad had iyo jeer ula dhaqantaa sidii qaali oo kale. Oprah Winfrey had iyo jeer waxay ahayd a hadlaha dhiirigelinta, oo kahadlaya nolosha iyo waxyaabaha dhabta ah.
Waxay tiri waa wax aad muhiim u ah in nolosha la qabsado sida ay hadda tahay, laakiin waqti isku mid ah, qofku waa inuu iska hubiyaa inaad dooratay qayb badan oo noloshaada ah. Dhammaantiin waxay kuxirantahay adiga ama inaad rabto inaad faraxdo iyo haddii kale. Sidaa darteed, waxaad u baahan tahay inaad si caqli leh u go'aamiso.
Waxaad ubaahantahay inaad hubiso in noloshu hadiyad kuu tahay, mar labaadna adiga mar dambe kuma soo noqon doonto. Hal daqiiqad ayaa la kharash gareeyay, manaad filan kartid inay mar kale ku soo noqonayso mar kale. Sidaa awgeed, adiga ayay ku saaran tahay sidaad wax u aragto, oo sidaas awgeed, iska hubi inaad waxyaalaha si wanaagsan ula dhaqanto.
Sidoo kale, Oprah Winfrey ayaa yidhi waxaan go’aansanaa dadka nala hareereysan! Dhammaanteen annaga ayay nagu xiran tahay sida aan wax u qabanno. Sidaa daraadeed, wareegga asaaga ah ee aan dooranay inaan iska sii jirno dhammaantood waxay ku hoos jiraan xukunkeena. Natiijo ahaan, waa inaan had iyo jeer dooranaa inaan la joogno dadka na kor qaada.
Waa inaanu waligeen u ogolaan dadka kale inay naga niyad jabiyaan. Waa lama huraan in lala joogo dadka na dhiirrigeliya oo na dhiirrigeliya sidii aan gaarista u heli lahayn oo aan ula joogsan lahayn dadka sabab u noqday marinnadayaga.
Oprah Winfrey Quotes had iyo jeer waxay u ahayd il dad badan dhiirigelin, waxayna had iyo jeer u aragtay inay dadka ku dhiirrigeliso farxad iyo xikmad.
Waxay tiri waa inaadan waligaa khaladaadkaaga u arkin inay tahay khaladka ugu weyn ee aad waligaa sameyn laheyd, oo aad ka toobad keento arrintaas inta ka hartay noloshaada. Taabadalkeed, waa inaad had iyo jeer u calaameysaa sidii casharradaada oo aad ogtahay inay tan kuu keeneen. Khaladaadkaaga ayaa kaa caqli badan!
Oprah Winfrey had iyo jeer waxay dhiirigelisay dadka adduunka oo dhan. Sidaas awgeeda, waxay tiri waa inaad nolosha u qaadataa si hufan, ka dibna kaliya ayaa awoodi doontaa inaad waxbadan ka hesho.
Oprah Winfrey Quotes waa is-sharrax iyo in badan oo ka mid ah, waxaad arki lahayd iyada oo dadka weydiinaya inay eegaan qoto dheer ee nolosha halkii ay ka arki lahaayeen oo keliya dhererkeeda.
Waxay tidhi waa muhiim in noolow daqiiqad kasta oo noloshaada ah, halkii aad ka arki lahayd tirada sano ee aad ku nooshahay!
Waxaad noqotaa waxa aad rumeysan tahay, maahan waxaad u malaynayso ama waxaad rabto. - Oprah Winfrey
Kulligeen waxaan raacnaa mabaa'diyo ina haga nolosha. Isla mar ahaantaana, dhammaantood…
Kacdoonka ugu weyn ee aad ka geysan karto waa inaad ku noolaato nolosha riyadaada. - Oprah Winfrey
Sida ugu fiican ee aad wax u sameyso xilligan waxay kugu meeleyneysaa meesha ugu fiican daqiiqada soo socota. - Oprah Winfrey
Sida ugu fiican ee aad wax u sameyso xilligan waxay kugu meeleyneysaa meesha ugu fiican daqiiqada soo socota. - Oprah…
Adiga ayaa mas'uul ka ah noloshaada. Ma ceshan kartid qof kale eedayntaada. Noloshu runti waa ku dhaqaaqista. - Oprah Winfrey
Adiga ayaa ah qofka mas'uul ka ah noloshaada. Haddii wax isu beddelayaan…